पाइलट र एयरहोस्टेससँग स्वास्थ्य रिपोर्टको पाँच गुणा महँगो शुल्क
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजपाइलट र एयरहोस्टेससँग स्वास्थ्य रिपोर्टको पाँच गुणा महँगो शुल्क
विराटनगर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेका चिकित्सकले पाइलट र चालकदलका सदस्यहरूसँग पाँच गुणा महँगो शुल्क लिएर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेको खुलेको छ ।
प्राधिकरणले डा. राजीवकुमार देव र डा. सञ्जय कार्कीलाई उड्डयन स्वास्थ्य सुरपरिवेक्षक नियुक्त गरेको छ । प्रत्येक वर्ष पाइलटहरूको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट हेर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरी प्राधिकरणले चिकित्सक नियुक्त गरेको थियो । सोही स्वास्थ्य प्रमाणपत्रका आधारमा पाइलटहरूको लाइसेन्स नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।
तर, डा. राजीवकुमारले ओम अस्पतालमा पाइलट र चालकदलका सदस्यहरूलाई बोलाउँदै तोकिएभन्दा पाँच गुणा महँगो शुल्क लिएको एक पाइलटले बताए । प्राधिकरणले भने प्राधिकरणमै आएर स्वास्थ्य रिपोर्ट हेर्ने र एकजनाको एक हजार मात्रै शुल्क लिने गरी नियुक्त गरेको थियो ।
विगतमा पाइलटहरूलाई कति रकम लाग्ने भन्ने विषयमा समेत प्राधिकरणको सेफ्टी विभागले जानकारी नदिएको पाइएको छ । मूलतः हवाई सुरक्षा तथा उडान सुरपरीवेक्षणको जिम्मा प्राधिकरणअन्तर्गतको सुरक्षा विभागको हुन्छ ।
प्राधिकरणका चिकित्सकले वार्षिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी गर्ने १५ सयभन्दा बढी पाइलट र चालकदलका सदस्य छन् । तर, अहिले कोभिड–१९ पजिटिभ र नेगेटिभ देखिँदा रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ । हरेक पाइलटले प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र लिएर उडानमा जानुपर्छ । तर, चिकित्सकले महँगो शुल्क लिँदा प्रत्येक १५ दिनमा पाँच हजार रुपैयाँ बुझाउनुपरिरहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ
पाइलट र एयरहोस्टेस महँगो शुल्क स्वास्थ्य रिपोर्ट